सरकारले प्रहरीको नयाँ आईजीपी छान्यो, सिलवाल पक्का ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सरकारले प्रहरीको नयाँ आईजीपी छान्यो, सिलवाल पक्का !
काठमडौं । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधी सकिन केहीदिन बाँकी रहँदा भावी आइजीपीका लागी दौडधुप तिबब्र बनेको छ ।
तर नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजिपीमा नवराज सिलवाल वन्ने पक्का भएको छ । स्रोतका अनुसार अबको दोस्रो मन्त्रिपरिषद बैठकले सिलवाललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्नेछ ।
सिलवाल बरियतामा पनि अगाडी रहेको र अरु हिसावले पनि सक्षम रहेको निस्कर्षसहित सरकारले बरियतालाई ने आधार मान्ने निस्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान आईजिपी अर्यालको नियमित कार्यकाल फागुन २ गते सकिदैछ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जयबहादुर चन्दको पक्षमा प्रस्ताव आएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिलवाललाई नै बनाउनुपर्ने तर्क गरेपछि सरकार बरियताका आधारमा आर्इजीपी बनाएर राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य भएको सन्देश दिन खोजीरहेको एक मन्त्रीले नेपालपाटीलाई बताए ।
सिलवालपछि वरियतामा रहेका चार नम्बरसम्मका डिआईजीहरु आइजीपी बन्न दौडधुपमा लागेका छन् ।
उनीहरु शक्ति केन्द्रमा धाउन थालेका छन् । अर्याल २० गतेपछि विदामा बस्ने तयारीमा छन् । अर्यालपछि नेपाल प्रहरीको भावी आईजिपीमा वरियतामा एक नम्बरमा रहेका डिआईजी सिलवाल नै हुन । उनी पनि आफु बन्ने पक्का भएको भन्दै ढुक्क भएर बसेका छन् । तर उनलाई उछिन्न उनीभन्दा पछिका डिआईजी प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र चौथो नम्बरका डिआईजी वमबहादुर भण्डारी शक्तिकेन्द्रको लविङमा अहिले पनि लागीरहेका छन् ।
दुई प्रहरी प्रमुखका लागि माओवादी कांग्रेस-भागबण्डा, सिलवालको सहमति उल्टाउने प्रयास
वरियतामा अर्याल दोस्रो, चन्द तेस्रो र भण्डारी चौथो नम्बरमा छन् । सिलवाल पछि दोस्रो बरियताका ट्राफिक प्रमुख अर्याल रहेपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीभन्दा बलियो सम्भावना चन्दको थियो । कांग्रेसको गृह मन्त्रालय र उनकै क्षेत्रका शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको सभापति भएको वेला आफु आईजिपी वन्ने दावी गर्दै डिआईजी चन्द आईजिपी वन्न सवैभन्दा वढी दौडधुपमा छन् ।
उनी कांग्रेस सभापति देउवाको क्षेत्रको र आस्थाका आधारमा कांग्रेस निकट पनि भएकाले आफ्नो हक लाग्ने बताइरहेका थिए । तर, उनको सपना अब पुरा नहुने भएको छ । अर्याल यसअघि सुडान घोटाला काण्डमा पनि जोडिएकाले उनलाई कमजोर बनाउन भ्रष्टाचारको मुुद्दा जोडिएको छ ।
उपेन्द्रकान्त अर्यालको म्याद सकिएपछि नेपाल प्रहरीले २५ औँँ आईजिपी पाउनेछ । केही बर्ष यता प्रहरीमा आइजीपी बन्नका लागि प्रहरी उच्च अधिकारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
52480 पटक पढिएको
सरकारले चन्दलाई नै आईजीपी बनाउने !
काठमाडौँ । सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नै आईजी...
नौ हजार प्रहरीको एकैपटक सरुवा !
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ९ हजार भन्दा बढी प्रह...
आईजीपी वाहेक प्रहरीभित्र अर्को चलखेल
काठमाडौं । आइजीपी बढुवा बिबाद नटुंगिदै नेपाल प्रहर...
आईजीपीको विवादका बेला सर्वेन्द्र खनाललाई नयाँ जिम्मेवारी
नेपाल प्रहरीको प्रवक्तामा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)...
ओमनमा शक्तिशाली आँधी, नेपाली सुरक्षित(भिडियोसहित)
काठमाडौं । मनको दक्षिणमा पर्ने सललाहमा प्रतिकिमि १...
काठमाडौं । मुलुकमा एक्कासी हपहपी गर्मी बढेको छ । प...
काठमाडौं । बाँकेको डुढुवा गाउँपालिकामा रहेको एक प्...
अझै तुईनकै भर, अढाई लाख नागरिक जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य !
काठमाडौं । पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण ग...